Nzira dzekurima nadzo munda | Kwayedza
Nzira dzekurima nadzo munda
15 Oct, 2020 - 10:10 2020-10-15T10:48:34+00:00 2020-10-15T10:48:34+00:00 0 Views
Varimi vanokurudzirwa kuti vagamuchire nzira dzekurima munda dzisingakanganise ivhu kana mamiriro ekunze (environment). Kurima kwaveko mazuva ano ndekwemhando yebhizimusi nokudaro zvakakosha kuti murimi acherechedze kuti nzira dzekurima dzaari kushandisa hadzisi kutaputsa mari yaanosara nayo muhomwe here, iya inonzi profit. Zvakare pasi rose riri kufamba nedingindira rekuchengetedza nharaunda. Nokudaro murimi anofanira kuona kuti nzira dzekurima dzaanoshandisa hadzisi kukanganisa utano hwevhu kana kurasa mvura zvakanyanya.
• 39m kureba kwendima (length) x 16m kufara kwendima (width) = 624 m2 (1/16th yehekita imwe chete)
4) ZERO-TILLAGE — Iyi inzira yekuti mbeu inodyarwa mumunda usina kurimwa. Makomba anovhurwa nebadza kana nemuchina wakagadzirirwa basa irori. Iyi nzira yakanaka nekuti haidi kuti varimi vashandise zvipfiwo zvavo, inochengetedza hunyoro pamwe chete nehutano hwevhu. Nzira iyi inoita kuti ivhu risakukurwe zvakanyanya nemvura kana mhepo (erosion).
Kuti nzira iyi ibudirire, zvakakosha kuti varimi vachengete 30% yemashanga asara mumunda uye inoda kuti sora ridzivirirwe zvakakwana.
Nzira iyi inoda zvakare kuti varimi vachinjanise mbeu dziri mumhuri dzakasiyana, kudzivirira twumbuyu nezvirwere mumunda pamwe nekungwarira kuomarara kwevhu pamusoro (surface compaction).
• Zvirwere, twumbuyu nesora zvinouraiwa kana varimi vachinge varima zvakanaka nekuti vanenge vapindura ivhu.
Izvi zvinobatsira kuti mbesa dzimere pamwe chete (uniform crop emergence) nekukura zvakanaka, mhedzisiro varimi vowana goho repamusoro.